Zlatan Ibrahimovic Oo Caayey Wadanka Faransiiska Iyo Colaadda Uu Kala Kulmi Karo
HomeWararka MaantaZlatan Ibrahimovic Oo Caayey Wadanka Faransiiska Iyo Colaadda Uu Kala Kulmi Karo
Zlatan Ibrahimovic ayaa lagu khasbay in uu raalli-gelin ka bixiyo aflagaado uu u geystay wadanka France, kadib markii ciyaar dhex martay kooxdiisa PSG iyo Bordeaux lagaga adkaaday naadiga lacagta badan ee PSG 3-2.
Ibrahimovic ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu aflagaadeeyey garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayey oo uu ku tilmaamay bahal bakhtiyey iyo sidoo kale kooxdiisa PSG oo uu sheegay in aanay u qalmin in ay ka dhisnaato wadanka France.
Kamaradaha ayaa qabtay Ibra oo aflagaadan samaynaya.
Laacibkan 33 jirka ah ayaa raalli-gelin ka bixiyey hadalkaas, waxaanu sheegay in aanu ula jeedin in uu aflgaadeeyo wadanka shacabka Faransiiska, ujeeddadiisuna aanay ahayn in uu caayo dadka dalkaas balse uu ka hadlayay kaliya kubadda cagta.
“Waxa aan ka hadlayay kubadda cagta, wax kale kamaan hadal. Ciyaarta ayaan guul darraystay, waana in aan aqbalo laakiin ma aqbali karayo garsooraha marka aanu ku dhaqmaynin shuruucda, mana aha markii ugu horreeyey ee ay tani dhacdo.” Sidaas ayuu yidhi Ibrahimovic.
“waxaan hadlayay anigoo cadho halkii ugu sarraysay maraya, qof walbaana wuu garanayaa marka wakhtigan oo kale lagu jiro in aad odhanayso waxyaabo bilaa macno ah. Waan ka raali-gelinayaa haddii ay dadku dareemeen in aan caayey.” Ayuu mar kale yidhi.
Weeraryahanka reer Sweden ayaa laba gool u dhaliyey kooxdiisa ciyaartan oo ku dhamaatay 3-2 lagaga adkaaday PSG, laakiin wax aka cadhaysiiyey goolka saddexaad ee Bordeaux oo uu u dhaliyey Diego Rolan, markaas oo uu cadho is hayn kari waayey Ibrahimovic.
Ibrahimovic ayaa markaas yidhi: “15 sannadood ayaan ciyaarayay kubadda cagta, waligayna maan arag garsoore ka nacasan” sidaas ayuu yidhi Ibra oo qaylinayey.
Waxa uu intaa raaciyey: “Xattaa uma qalmaan in PSG ay waddankoodan ka dhisnaato.”.
Rolan ayaa dhaliyey kubbad uu ka helay difaacyahanka reer Brazil ee Mariano, iyadoo kubbadaasina ay ka baxday labada lugood ee goolhaye Salvatore Sirigu dhexdooda. Goolkaas ayaa soo afjaray 15 ciyaarood oo xidhiidh ahaa oo aan laga badinin PSG dhamaan ciyaaraheedii.
PSG oo toddobaadkii Arbacadii hore ciyaar qurux badan ku garaacday Chalesea oo ay ka reebtay Champions League ayaa u muuqatay in ay daallan tahay, waxaana dhaawac kaga maqnaa David Luiz iyo Yohan Cabaye laakiin waxa la filayaa in ay dib ugu soo laabtaan kulanka Marseille ee muhiimka u ah PGS ee dhici doona toddobaadka dambe.
Laacibka khadka dhexe ee PSG ee lagu magacaabo Adrien Rabiot ayaa sheegay in kooxdiisu ay daallanayd laakiin haddana aanay cudur daar ka dhigan karin arrintaas.
Ciyaartan dhex martay Bordeaux iyo PSG oo ku dhamaatay 3-2 kana dhacday garoonka kooxda Bordeaux, ayaa waxa qaybtii horeba daqiiqaddii 18aad Bordeaux goolka koowaad u dhaliyey laacibka Lamine Sane, laakiin daqiiqaddii 50aad ayuu barbarreeyey Ibrahimovic, hase yeeshee laacibka khadka dhexe ee Whbi Khazri ayaa gool kale u dhaliyey Bordeaux, kaas oo uu mar kale rikoodhe ku barbarreeyey Ibrahimovic. Daiiqaddii 89aad ayuu Rolan guulka guusha u dhaliyey Bordeaux, waxaanay ciyaartu ku dhamaatay 3-2.
Kala horreynta dhibacaha:
Lyon – 58
PSG – 56
Marseille – 54
Monaco – 50
Saint Etienne – 49
Bordeaux – 48
Mario Balotelli Oo Warqad Qiiro Xambaarsan U Diray Steven Gerrard
Dalka Qatar Oo Doonaya In Guardiola U Hoggaamiyo Koobka Adduunka 2022